Ngokusho isembozo, lesi sidakamizwa "Aflokrem" (emollients) libhekene njenge-ejenti eqeda ukuvuvukala kanye antipruritic. Kuyinto ngokuvamile kungenzeka ukuhlangabezana ukubukwa zalabo abaye basebenzisa izidakamizwa. "Aflokrem" Izibuyekezo libhekene njengoba ithuluzi elikahle. Kodwa namanje kunomvuzo ukuthola ukuthi yini uhlobo izidakamizwa, futhi izinkinga kufanele isetshenziswe.
"Aflokrem" yakhelwe isikhumba ukuthi uthambekela ukoma anda nokungezwani komzimba. Isikhathi esining impela ke ezinqunyiwe isikhumba ukucasuka izinsana. Futhi-ke isetshenziswa moisturize ubuso kanye nezinye izitho zomzimba ngozwelo eliphezulu.
Ngenxa lesi sakhiwo olunikezwa izibalo ezilandelayo:
Ukwandiswa umsebenzi okuvikela umswakama ukulahleka.
Ukwandisa isikhathi zesikhumba hydration.
Kuletha ibhalansi lipid.
Leli thuluzi ngokushesha angena isikhumba, futhi asihlali i ifilimu oily phezu, elibangela ukungakhululeki. Ngaphezu kwalokho, "Aflokrem" ivikela isikhumba emathonyeni zangaphandle, ithambisa, aqede ukulunywa futhi ububomvu, aqede ukoma, uyaxebuka, futhi kunomphumela ukuzola.
Izingxenye in the yokwakheka izidakamizwa zingene epidermis bese unikeza lipids entula esikhundleni. Ngenxa yalokhu kukhona ukubuyiselwa okusheshayo ibhalansi, futhi inikeza eside amanzi lipid umzimba kwesikhumba.
Ngokuvamile, lokhu izidakamizwa ezinqunyiwe nokuvimbela izimpawu ezilandelayo:
izifo zesikhumba imvelo dermatological, okuyizinto ezibangela anda ububomvu, ukucasuka kanye ukoma. Lezi zifo ngokuvamile ahlanganisa dermatitis atopic, eczema, dermatitis iguliswa futhi film nezinye izifo zesikhumba.
Ephambi kwezinduna izimbangela okuholela anda isikhumba ukoma nokuvuvukala. Ukuze labo zihlanganisa emoyeni elomile ezakhiweni, umphumela abandayo, imimoya ephezulu (obvetrivanie), ukusetshenziswa njalo amanzi abandayo, umphumela yezimonyo, zamakhemikhali yokuwasha.
Futhi, iqondiswa ngokuhlanganyela nezinye izidakamizwa ngesikhathi ukwelashwa elihlangene nokunakekela ukulandelelwa dermatological isikhumba esibi.
Okwakubaluleke ngokukhethekile ukusebenzisa izidakamizwa "Aflokrem". Umhlahlandlela kuzokusiza uqonde uma kukhona izimpawu okumele asetshenziswe esikhunjeni. "Aflokrem" sisetshenziswa njengoba ungqimba elincanyana futhi triturated nombala phezu bonke ubuso endaweni ethintekile kuze ugxile. Ngosuku kuyinto efiselekayo ukwenza lezi izinqubo okungenani kabili, ezingaphezu kuka-unga. Ubuningi ngosuku isicelo se-ejenti kuncike ngezinga elithile ukoma futhi ukuluma. Umonakalo okwengeziwe, kulapho ngokuvamile udinga ukusebenzisa lolu ukhilimu.
Kuwufanele benaka yokuthi leli thuluzi efanelekayo izingane. Ngakho-ke, uma kukhona "Aflokrem" endlini (emollients), yokusetshenziswa kuzokusiza unqume ukuthi ungakusebenzisa kanjani ekwelapheni izingane. Ngokuvamile, lokhu ejenti isetshenziselwa ukwelapha isikhumba ukucasuka izinsana. Ngemva kuzodlula izimpawu zesifo main, ingasetshenziswa njengendlela prophylactic. Phakathi nokuvinjelwa ukhilimu lisetshenziswa isidumbu sengane kanye ngosuku. Ngokuvamile, ukwelapha ezinganeni osanda kuzalwa hhayi amasonto angaphezu kwamathathu.
Ukwakheka, isakhiwo kanye nokupakisha
Pharmacy ngokuvamile ukulungiselela "Aflokrem" edayiswa ngendlela ukhilimu noma wamafutha 0.05%. Ngokubukeka, ukhilimu umbala omhlophe bushelelezi.
Qiniseka ukuthi uzijwayeze sotavlyaet izidakamizwa "Aflokrem", ukwakheka kuhlanganisa izingxenye ezilandelayo:
Excipients okusebenzayo kanye - amanzi ephezulu ubumsulwa, emhlophe upharafini elithambile, emulsifier Lanette®, uwoyela amaminerali ezimhlophe, Cetomacrogol 1000 RA (macrogol cetostearyl ether), EMPROVE®.
Izingxenye ukuthi ubophezelekile ukunakekela ezingeni edingekayo pH - sodium dihydrogen phosphate monohydrate, wali band acid, i-sodium hydroxide.
Itholakala amashubhu metal 50 no-100 amagremu, emabhokisini.
Noma ungasebenzisa "Aflokrem" uma kudingekile. Izibuyekezo basikisela ukuthi ohlangothini-imiphumela zenzeka kuyaqabukela, kodwa kungcono ukuxwayisa wena kusengaphambili bese yenza umzamo wokwazi imiphumela emibi lesi izidakamizwa:
Cishe-2% wezindleko amacala kukhona esikhumbeni ukulunywa, evutha, kome yanda, erythema, ukuqubuka kwezinhlobo palpuleznogo.
Kakhulu akuvamile kwenzeka folliculitis, akneiformnaya amawala, hypopigmentation, dermatitis perioral, dermatitis, ukutheleleka yesibili, isikhumba yoma, striae, miliaria.
Uma kukhona ukusabela hypersensitivity kuya izidakamizwa noma izimpawu ngenhla, ekwelapheni lokhu kusho ukuthi kumele ayeke futhi uthintane onguchwepheshe!
"Aflokrem" kufanelekile bonke abadala nabantwana. Kodwa njengoba ngezinye izikhathi waphawula side effects, it has ezinye Izimo.
Lesi sidakamizwa zivinjelwe imicimbi elandelayo nezifo:
Ukuzwela okwandisiwe isikhumba.
Izenzo ugcunsula esikhumbeni.
Skin ukusabela emva yokugoma.
Vula amanxeba kanye imihuzuko.
izifo ezibangelwa amagciwane kwesikhumba.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, ukusetshenziswa kwezimali "Aflokrem" avumelekile, kodwa namanje kuwufanele ezinye izinyathelo zokuphepha. Ngaphambi kokusebenzisa leli thuluzi, it is kakhulu Kunconywa ukuba uxhumane nodokotela wakho ukuze bagweme noma ikuphi sengcupheni ezingenzeka embungwini. Kungcono ngesikhathi sokukhulelwa isetshenziswa isikhumba kusho hhayi isikhathi eside kakhulu futhi kuyinto efiselekayo smear izindawo elincane emzimbeni.
Phakathi ibele isicelo "Aflokrem" kumelwe ngokuhambisana izinyathelo zokuqapha. Umuthi akufanele zisetshenziswe amabele ngaphambi Udla.
"Aflokrem" akusho uxhumana neminye imithi kanye nezidakamizwa. Ngakho-ke, lingase lithathwe ngokuphepha nabanye izidakamizwa ukuba ingakhathazeki ukuthi wayengeke abe nemiphumela engemihle futhi umonakalo empilweni.
Leli thuluzi kumele kusetshenziswe ihlelwe ngokulandelana kwezihloko isikhumba hydration. Ngokuvamile lapho isetshenziswa ezindaweni ezithintekile komzimba.
Ayikwazi ukusetshenziswa isikhala ezizungeze amehlo, njengoba kungase kubangele glaucoma kanye ulwelwesi esweni. Futhi angeke zisetshenziswe ezindaweni zomzimba ne amanxeba evulekile.
Uma ngenkathi usebenzisa ukhilimu isifo ecashile nzima izifo ezibangelwa amagciwane noma fungal, it is arcade esetshenziswa ngokuhlanganyela namanye amanxusa elwa namagciwane kanye antifungal.
Lapho ukuthenga futhi kungakanani "Aflokrem"
Bayidayise zonke ngamaketanga ekhemisi kanye ezitolo izimonyo isikhumba ukunakekelwa. Izindleko ithuluzi 40 amagremu tube ngamunye ruble 400, futhi ngamapayipi of 20 amagremu - ruble 300.
Yini babe lesi sidakamizwa "Aflokrem" Izibuyekezo?
Ungathola imibono ehlukene mayelana izidakamizwa "Aflokrem" (emollients). Izibuyekezo atholakala kokubili emihle nemibi. Ngokuvamile, "Aflokrem" elichaza Okuhle. Abaningi abasebenzisa leli thuluzi, uqaphele ukuthi izidakamizwa empeleni aqede ukulunywa, ukucasuka ukoma futhi ububomvu. Ngaphezu kwalokho abathengi ukubona ukuthi isenzo ukulungiselela iqala kusukela ezinsukwini zokuqala isicelo. abazali abaningi abanezingane osanda kuzalwa usebenzisa "Aflokrem". Izibuyekezo wathola omuhle kuphela.
Kodwa ngaphezu Izibuyekezo ezinhle kukhona omubi. Kwabanye, lokhu izidakamizwa anisondelanga. Abantu bathi akazange ukubasiza balahle izinkinga zesikhumba.
Ngokuvamile, lokhu kusho Izibuyekezo ezinhle.
Umuthi 'Edas 131 ": imfundo kanye impendulo
Umuthi 'Avastin ": Nobufakazi
Indlela yokukhipha izicabucabu endlini: izikhambi zabantu kanye namakhemikhali